2020 Shuangye ebike katalọgụ | ebike Shuangye
Home 2020 Shuangye ebike katalọgụ
Nke a bụ ihe kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ igwe eji agba ọkụ eletrik igwe Shuangye na 2020, tinyere ihe ọhụụ na igwe ịgba ọkụ eletrik R&D. Kedụ ụdị ebike ịchọrọ, ihe niile achọtara na katalọgụ Shuangye ebi nke 2020, dị ka igwe e-ugwu, ebiges obodo, mpịcha elektrik, igwe anaghị agba eletrik ma ọ bụ batrị ebike na ndị ọzọ.
Nke a bụ njikọ nke katapila igwe kwụ otu ebe dị 2020 Shuangye, nke na-akwado ịgụ na ntanetị na nbudata.
Shuangye na-elekwasị anya na imepụta igwe eletriki eletriki na mbupụ ihe dị ka afọ 12, ma na-enye ndị ahịa anyị nnukwu ọrụ na ịke igwe eletriki eletrik. Na-akwado ọrụ OEM & ODM na ikike batrị, oke moto, agba, ngwugwu, ect.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ụdị nkọwa na ozi dị ukwuu, gaa na anyị Ụlọ Ọrụ Weebụ ma ọ bụ hapụ ozi gị n'okpuru. Mgbe ịchochara, anyị ga-aza ya (zaa ajụjụ gị ma ọ bụ tụọ ngwaahịa kachasị mma) n'ime awa iri abụọ na anọ.